Uyithumela njani i-imeyile kunye nesicelo seMeyile | Ndisuka mac
Nangona singafumana izicelo ezingaphezulu nangaphezulu zokulawula ii-imeyile zethu, iApple ayinakongeza imisebenzi emitsha kwisicelo sendalo esinikwa yiApple kwiMacOS, Imeyile.Imeyile sisicelo esisisiseko esifanelekileyo kwaye akukho naluphi na ukhetho olusivumela ukuba siphathe usuku. kwimini yee-imeyile zethu ngaphandle kobunzima obukhulu. Kodwa ukuba sifuna umxhasi we-imeyile ngenani elikhulu lokukhetha, isitayile seMicrosoft Outlook, Imeyile iyasilela. Kodwa ukushiya bucala into eluncedo okanye hayi kwiindidi ezahlukeneyo zabasebenzisi, namhlanje siza kugxila ekuboniseni umsebenzi onokuthi uye ungaqwalaselwa kuninzi lwenu.
Xa uthumela i-imeyile, njengomthetho ngokubanzi, nokuba umthengi we-imeyile simsebenzisa njani, sihlala sisiya kwitreyi yezinto ethunyelweyo cofa kabini kwi-imeyile esifuna ukuyithumela ukuvula, Sibhala umamkeli kwakhona kwaye ucofe ekuthumeleni. Emva koko i-imeyile entsha ithunyelwe, ukuba iya kubekwa phezulu ibonisa umhla kunye nexesha apho iphinde yathunyelwa khona.
Nangona kunjalo, ngeMeyile, singathumela ngokulula i-imeyile ezikwitreyi yezinto ezithunyelweyo ngaphandle kokwenza inkqubo esihlala siyenza kwaye enamanyathelo ahlukeneyo, amanyathelo anokuba nzima xa kufuneka siwenzile umsebenzi ngaphezulu kwesinye kunye nakabini.
Dlulisa i-imeyile nge-imeyile usetyenziso
Inkqubo yokuthumela i-imeyile ilula kakhulu kwaye ifuna kuphela ukuba siye kwitreyi yezinto ezithunyelweyo.
Xa sele silapho, sifumana i-imeyile ebuzwayo, sizibeka kuyo ngokunqakraza-ekunene kwimouse ukufikelela kwimenyu yokuhla.
Ngeli xesha kufuneka sikhethe ukhetho lokuThumela kwakhona. Yenziwe. I-imeyile iya kuthunyelwa kwakhona ngaphandle kokuyihlela ngaphambili, okanye ukufaka idilesi ye-imeyile yomamkeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyithumela njani i-imeyile kunye nesicelo sePosi
Ungazidibanisa njani iingoma ezimbini kwi-mp3 kunye nokuphicotha kwi-macOS